Ny headphones an'ny Galaxy S6, kopia vaovao? | Vaovao IPhone
Miaraka amin'ny Mobile World Congress eo am-panombohana dia mihabe hatrany ny tsaho izay azontsika jerena momba ireo vokatra haseho amin'ity hetsika lehibe mitranga ao Barcelona ity. Iray amin'ireo fitaovana kintana amin'ny MWC ny Samsun Galaxy S6, izay hasehon'ny orinasa amin'ny Unpacked vaovao.
Nianarantsika tsikelikely ny antsipiriany momba ny ho endrik'ilay sainan'i Samsung vaovao amin'ity taona 2015 ity, miaraka amin'ireo sary voasivana izay tsy namela ny olona tsy hiraharaha. Tao amin'izy ireo dia nahita fitaovana iray nitovy tamin'ny Galaxy S5 izahay, na dia nampahatsiahy anay mazava tsara an'ireo lafiny vaovao aza ireo iPhones 6 sy 6 Plus.
Afaka mahita tondra-drano vaovao ankehitriny isika izay anehoana an-tsarimihetsika heno ho tafiditra ao amin'ity fitaovana Samsung ity. Fantatsika fa ny Koreana mbola tsy nampiavaka azy manokana mihitsy izy ireo raha ny momba ny fanaovana vokatra vaovao, ary toa tsy ho faningana koa io. Raha voamarina fa ireo headphone ireo dia hitantsika amin'ny sary, dia hiatrika tranga "aingam-panahy" vaovao amin'ny marika aziatika amin'ny orinasa hafa eny an-tsena isika.
Amin'ny sary izay mitarika an'ity lahatsoratra ity dia afaka jerentsika amin'ny ankavia ilay modely navoakan'ny headphone Samsung, fa ny sary eo ankavanana kosa mifanaraka amin'ny EarPods izay ampidirin'i Apple amin'ireo iPhones rehetra azy hatramin'ny taona 2012. Tsy fantatray ny haben'ny fahamarinan'ireto sary ireto, na dia vitsy aza ny sisa tavela amin'ny fampisehoana an'i Samsung ary tsy ho ela dia ho fantatsika ny antsipirian'ny fitaovana vaovao nomanin'izy ireo. antsika.
Avy amin'ny actualitygadget.com (@agadget) dia hanatanteraka fandrakofam-baovao mivantana momba ny hetsika rehetra nitranga tao amin'ny Kongresy Iraisam-pirenena Finday izahay mba tsy hahadino vaovao anao, misoratra anarana ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » fifaninanana » Ireo headphones Galaxy S6 tafaporitsaka sy noheverina dia toa zavatra toa antsika
Louis fahefatra dia hoy izy:
Avy eo hoy izy ireo fa tsy maka tahaka!
Valiny tamin'i Luis Cuarto
Rafy ramirez dia hoy izy:
Valiny tamin'i Rafy Ramirez
Pat stark dia hoy izy:
Valiny tamin'i Pat Stark
Mialà amin'izy ireo Copiones
Luigi collado dia hoy izy:
Jawell Freeman ny ho avy dia android rahalahiko
Valiny tamin'i Luigi Collado
Fernando Gonzalez dia hoy izy:
️Hahaha copie 😂😂😂
Valiny tamin'i Fernando González
Voarohirohy! dia hoy izy:
WTFFFFFF dia MARINA!
Valiny momba ny plagiarism!
Arkanjely Luis dia hoy izy:
Tsy miraharaha aho fa tsy hividy Samsung aleoko Sony na LG
Valiny tamin'i Arcangel Luis
Álvaro Hernán Aragon dia hoy izy:
Tena maharikoriko ahy i Samsung ...
Mamaly an'i Álvaro Hernán Aragón
Hehe nanantena izy ireo fa tsy hanana famoronana. Tsy hain'izy ireo ihany ny manao churros na aiza na aiza
Ary ireo mitsikera an'i Apple dia hividy ny kopiany iPhone 6 fa amin'ny android hahahahaha
Raul Klaus Isambert dia hoy izy:
Valiny tamin'i Raul Klaus Isambert
Jorge Hernandez dia hoy izy:
Valiny tamin'i Jorge Hernández
Rafael Pazos Serrano dia hoy izy:
Serieux ??? Tena ... Samsung tsy manana originality ... avy eo hoy izy ireo ... ho avy ny mpitsikera Androids hitsikera izao; / VAya tela !!!
Valiny tamin'i Rafael Pazos serrano
mitovy amin'ny bose ao anaty sofina izy ireo. Googling alohan'ny hamoahana ny nifinao.
Jenny rodriguez dia hoy izy:
Valiny tamin'i Jenny Rodriguez
Douglas Turcios dia hoy izy:
Adroid dia tsy misy ilana azy
Valiny tamin'i Turcios Douglas
Apple mandritra ny androm-piainany 🙌👌👌🎧 #iphonesia 😎😉
Sheila Cano Luna dia hoy izy:
Samsung dia maka tahaka avy amin'ny iphone ary ny iPhone dia alaina avy amin'ny Samsung hatrany ny tantara mitovy ... Raha mbola miasa ny mobiles ...
Valiny tamin'i Sheila Cano Luna
Migue dia hoy izy:
Ny teolojia fananahana dia orinasa fahatelo, izany no antony itovizany.
Mamaly an'i Migue
Adrian Ramirez Garro dia hoy izy:
mitovy izy ireo, hoy aho
Valiny tamin'i Adrian Ramirez Garro
Lenin Jaramillo Montalvo dia hoy izy:
Kopian'ny iPhone io
Valiny tamin'i Lenin Jaramillo Montalvo
Eny, natao niaraka tamin'ny Sennheiser izy ireo ... marika tsara dia tsara
tompokolahy ... mahatsiaro menatra aho indraindray!
Avy amin'ny iphone aho, fa ny mahita anao mamoaka vava toa izao dia maharikoriko ahy!
samy Sony na marika hafa dia samy nanisy «écouteur» toa ilay novokarin'i Samsung ho an'ny S6…. ary manala baraka anao ve? Amidy izy ireo na dia eo am-pelatanan'ny carrefour aza ... aza mieritreritra intsony fa marika iray ihany, satria rehefa mandika zavatra amin'ny marika hafa i Apple dia izaho no voalohany hangina.
Inona koa, ireo headphone ireo dia noforonina tsara kokoa noho ny an'i Apple (MANAO AZO IREO) ary mba hilalaovana fanatanjahan-tena dia tsy maintsy nividy headphones Sony hafa mitovy amin'ny an'ny Samsung hita amin'ny sary… Saingy mazava ho azy, ..,. Samsung io satria efa kopian'ny Apple izy io! Ilay virijiny toa ireto olona ireto, menatra aho mahita olona toa anao, fantatro fa hanadala ahy ianao, tsy raharahako izay lazainao amiko, fa ny anao efa MOMBA AN'NY PAN TOSTAO ... dia efa jerena sahady amin'ny
Na izany na tsy izany, isan'andro dia mazava kokoa amiko fa ny maha-mpankafy telefaona ahy dia tsy misy dikany, ny fanatisme dia mihoatra ny fahazoana ny fahalalako ... MIARAKA!
Averquepasaqui dia hoy izy:
Tsy afaka nifanaraka taminao intsony i Raquel ... hevitra tsara ... tsy mila masiaka amin'ny marika rehetra ianao. Samy manana ny hatsarany sy ny fatiantoka ananany izy rehetra ary nalaina tahaka tamin'ny rehetra izy ireo.
Mamaly an'i Averquepasaqui
Eny, lazaiko fa noforonina tsara kokoa izy ireo mba hahatonga ny feo ho tonga amin'ny sofina tsara kokoa.
Manana fiarovan-doha sennheizer tena mitovy aho
Felipe Garcia dia hoy izy:
Ireo avy amin'ny Samsung dia kopia
Valiny tamin'i Felipe Garcia
Alberto Soberanes dia hoy izy:
Ny mpanoratra an'ity pejy ity dia nanova ny lohahevitra, heveriko fa tsy miraharaha firy izy ireo fa misy ny olona tena mandeha mijery famoahana satria liana amin'ny vaovao amin'ny haitao sy mahita an'ity karazana tabloid publication ity. Rehefa nanomboka ity pejy vaovao ity ianao dia tena tsara ny iPhone. Mieritreritra aho fa tsy mifantoka amin'ny fanaovana tatitra izy ireo fa amin'ny fitsikerana izay ataon'ny orinasa iray izay tsy Apple. Mba ovay sahady izy !!!!!
Mamaly an'i Alberto Soberanes
Sergio Montero Vela dia hoy izy:
Ny fahombiazan'ny Samsung, nokapohin'izy ireo izy noho ny endrik'izy ireo sy ny fakana tahaka ny fifaninanana saingy natsembohany daholo ny tavy, nataon'izy ireo mitovy ny S6 amin'ny iPhone 6 ary mitovy amin'ny headphones, izay mampiahiahy mitovy amin'ny Ear Pods an'ny
Valiny tamin'i Sergio Montero Vela
Tompokolahy ... ity no S-EarPod vaovao
Mety tsara fa taorian'ireo triatra rehetra ireo dia ilay earpod vaovao ... hehehe
Tsemboka aho, mividy iphone 6 sy galaxy s6 aho
George Camba dia hoy izy:
Inona izany hoe tsy manana eritreritra izany
Valiny tamin'i George Camba
TT dia hoy izy:
… Ary mandritra izany fotoana izany, paoma, samsung, sns mameno ny paosiny. Raha ny fahalalako azy dia mividy singa ao amin'ny Samsung i Apple. Tsy misy dikany afa-tsy amin'ireo bilaogera mahantra izay mahazo ny anjarany avy amin'ny fomba fijery sy dokam-barotra ihany koa.
Ity no fotoana farany nidirako tao amin'ity bilaogy ity.
Valiny amin'ny TT
Sergio Ros Romera dia hoy izy:
Malahelo izy ireo fa maka tahaka amin'ny zava-drehetra, ry reniko, mila mangalatra iPhones 6 fotsiny izy ireo ary mamafa ny iPhone ary mametraka android ary mivarotra azy ireo toa ny Samsung
Valiny tamin'i Sergio Ros Romera
Jordi DiPla dia hoy izy:
Valiny tamin'i Jordi DiPla
toa iphone izao? satria tsy hitako hoe mitovy amin'ny iphone na vazivazy izany!
ilay tsy mitombina dia mitovy amin'ny Z3 kokoa noho ny iphone
anti-asa dia hoy izy:
Ary amin'ny vaovao hafa, Apple dia nitory ny natiora tamin'ny famolavolana endrika ny paoma.
Meh, eto dia efa hadinonao fa voaheloka handoa ny PLAGIARISM an'ny teknolojia vahiny ampiasain'ny iTunes i Apple.
Raha orinasa hafa no manao azy dia plagiarism, raha Apple no manao azy dia tsy maintsy kisendrasendra fotsiny izany.
Valin'ny asa fanoherana
Mauricio Galindo Arias dia hoy izy:
kopia toy ny mahazatra ...
Valiny tamin'i Mauricio Galindo Arias
Alangad dia hoy izy:
Hahaha Tsy zakan'i Samsung ny sitrapon'i Apple, satria manambady izy ireo
Mamaly an'i Alangad